क्षमा पाउ ! कसैको भजनको लागी समय छैन | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← सांस्कृतिक मंचको नया बर्ष बिशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमको लागि अतिथि कलाकार सीमा सङग्रौला भोली दिउसो कुवेत आउँदै
नेपाली जनसंपर्क समिती कुवेतले चौथो वार्षिक उत्सब तथा मे दिवस मे १ तारिक मनाउदै →
क्षमा पाउ ! कसैको भजनको लागी समय छैन
Posted on 20/04/2015 by डम्बर 'माइला' | टिप्पणी छोड्नुहोस्
कार्यक्रममा उपस्थित भएको बेला मलाई ब्याज नलगाउनु म आयोजकलाई समेत अनुरोध गर्दछु । मेरो कुनै गुनासो रहने छैन । तर तपाईले गरेको राम्रो काममा मेरो संधै साथ र सहयोग हुने छ । तपाईले समाचार लेख्न पाउँदैनस भने पनि मेरो कलम चल्ने छ । तपाई राम्रो काम गर्नुस् । समाचार लेखि देऊ भन्न पर्दैन
म श्रमजीवि पत्रकार हुने मौका नपाए पनि विगत केहि बर्ष देखि लगातार पत्रकारिता गरिराखेको छु । यो मेरो पत्रकारिता समाजसेवी पत्रकारिता हो । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने कस्तो पत्रकारिता हो ? समाजसेवी पत्रकारिता पनि हुन्छ ? यो कस्तो खालको पत्रकारिता हो भन्ने सवाल यहाँ बुज्रुकहरुले उठाउन सक्छन । यस्तो लाग्नु स्वाभाबिक हो तर मैले गरेको पत्रकारिता त्यस्तै खालको छ जस्तो नाम दिएर म कुरा गर्दैछु । खाडिको गर्मिमा आठ घण्टा पसिना बगाएर बचेको समय समाजमा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई चिर्न र प्रवासी नेपाली लाई सु(सूचित गर्न सचेत मनले जे अरायो त्यही गरिन्दैछ । जहाँ सम्म मैले गर्ने पत्रकारिताले समाजलाई घाटा गरेको छैन भन्ने मेरो विश्वास पनि हो । यस्तो खालको पत्रकारिता वापत मैले कसैबाट सु को पैसा पाएको छैन । आफु र आफ्नो परिवारको पेट काटेर पत्रकारिताको लागि खर्च गर्नु परेको छ । यहाँ मैले केहि पाईएन वा कसैले केहि दिएनन् भन्न खोजेको भने होइन । यर्थाथ र सत्य ओकल्नु पर्ने सन्र्दभमा यो पनि छुटाउन नहुने कुरा नै हो । त्यसो त नपाएको भन्न मिल्दैन । पैसालाई सवै कुरा हो भन्ने अर्थमा समाजबाट पाउने अमुल्य कुराहरु दाज्न पनि सकिन्न जुन मैले पाएको छु । गालि र ताली दुबैको महत्व आ आफ्नो ठाउँमा उतिकै हुन्छ जुन मैले पाएको छु ।
हृदय खोलेर कामको तारिफ गर्ने र धन्यवाद दिनेहरुले मलाई ठुलो प्रेरणा मिल्दै आएको छ । सान्तवना दिने प्रोत्साहित गर्ने र निरुत्साहित गरि निमोठन खोज्ने शुभ(चिन्तकको पनि कमि छैन । जस्ले जे भने पनि मैले गरेको कामबाट समाजलाई केहि हदसम्म भएपनि फाइदा पुगेको छ । एउटा मास कम्युनिकेशनको विद्यार्थीलाई यो भन्दा बढि के चाहियो ?
सामजिक काम अथवा सामाजिक पत्रकारिता गर्ने धैरै साथिहरु छन् कुवेतमा उनीहरुको पनि मेरो जस्तै समस्या छ अथवा होला । आपनो जागिर र समयले साथ दिए मात्र यो काम गर्ने हो । रातभर जागाराम बसेर होस् अथवा छुट्टिको दिन बाहिर ननिस्केर, महत्वपूर्ण समाचारहरु सम्प्रेषण गरेकै छन् । समाजमा देखिएका अथवा उठेका विषयहरुमा विश्लेषण गर्ने देखि समय सान्र्दिभक विषयमा विचार विमर्श राख्ने काम पनि साथिहरुबाट भई राखेको छ । पत्रकारिता गरेपछि पत्रकार भनेर चिनिए पछि सबै खाले समाचार सम्प्रेषण गर्नु पत्रकारको कर्तव्य हो र धर्म पनि ।
म यहाँ केही समाचार लेख्ने र लेखाउनेको कुरा गर्न चाहान्छु । राम्रो पत्रकारले समाचार आफै खोज्छ । समाचार खोज्ने पत्रकारका आफ्नै श्रोतहरु हुन्छन । मेरो समाचार छापी देऊ भनिरहन जरुरी छैन । तर कुवेतको समाजमा समाचार लेखाउने होड नै चल्छ । एउटै कार्यक्रमको सात आठ पटकसम्म समाचार लेख्ने र लेखाउने चलन छ । दुःखको कुरा समाचार लेख्दा उनीहरुको भजन नै गाउनु पर्छ अन्यथा धारे हात लगाएर फलानो पत्रकार यस्तो उस्तो भन्न थाल्छन । अझ साँस्कृतिक कार्यक्रम हुनुपर्छ जुन
पत्रकारले संस्था र आयोजकको भजन गाएको छ उसलाई ठुलो ब्याज लगाएर अगाडि राखिन्छ जस्ले भजन गाएको छैन । उसले पास समेत दुःखले पाउँछ । जाहे त्यो पत्रकारको योगदान समाजमा जति सुकै किन होस् ।
समाचार लेख्दिनु भनि फोन गर्ने यहाँको चलन हो कि के हो ? मैले बुझ्न सकेको छैन । मलाई धेरै कल आउने गर्छन समाचार लेख्दिनु पर्यो भनिन्छ । विषय वस्तु राम्रो लाग्यो भने म रातभर नसुतेर भए पनि लेख्ने कोसिस गर्छु । सहकर्मी साथिहरुलाई लेख्नु पर्यो भन्ने गर्छु । सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र लेखाउन खोजिएका समाचारहरु लेख्न मन लाग्दैन । प्रचार गर्ने समाचार लेख्न लगभग छाडेको छु । राम्रो विषय छ । खोज मुलक छ । अथवा समाजमा केहि नयाँ कुरा भएको छ । केहि घटना घटेका छन् भने तपाईले सामाजिक संजालमा राखेको सानो स्टाटसबाटै समाचार बन्छ । सबै विवरण पत्रकारले आफै खोज्छ । अथवा सबैको चासोको विषयको सूचना छ भने पनि पत्रकारले आफै विवरण मागेर समाचार बनाउँछन । तपाई अन्यायमा पर्नु भएको छ, तपाईको आवाज पब्लिक सम्म पुराउनु परेको छ भने पत्रकार खोज्नु स्वाभाबिक हो । अन्यथा समाचार लेखिदिएन भनेर रिसाउनु पर्ने केहि छैन ।
म स्पष्ट हुन चाहान्छु । मलाई समाचार छपाउनु पर्यो भनि कल नगर्दा हुन्छ । मलाई मुर्ख, घमण्डी, ठुलो पल्टिएको जे जे भन्नु छ मैले त्यसलाई स्वीकार गरौला । कार्यक्रममा उपस्थित भएको बेला मलाई ब्याज नलगाउनु म आयोजकलाई समेत अनुरोध गर्दछु । मेरो कुनै गुनासो रहने छैन । तर तपाईले गरेको राम्रो काममा मेरो संधै साथ र सहयोग हुने छ । तपाईले समाचार लेख्न पाउँदैनस भने पनि मेरो कलम चल्ने छ । तपाई राम्रो काम गर्नुस् । समाचार लेखि देऊ भन्न पर्दैन । मैले नलेखे पनि म जस्ता हजारौ हात छन् तपाईलाई सहयोग र समर्थन गर्ने तसर्थ समाचार लेखि दिएनन भनेर गुनासो नआओस ल ।
तपाईले थाहा पाएको कुनै सूचनाले नेपाल र नेपालीलाई केहि फाइदा पुराउँछ जस्तो लाग्छ भने कल गर्नु होस । तपाईले दिएको सानो सुचनाले धैरैको भलो हुन्छ । तर आफ्नै भजन गाउनका लागि भन्दै फोन गर्ने दुःख कसैले नगरिदिनु होला । भजनका लागि समय छैन । क्षमा पाउ !
This entry was posted in बिचार/बिमर्श, लेख/रचना, सन्देश. Bookmark the permalink.